बेलायतभर ५ वर्ष यताकै उच्च तापक्रम
इंग्ल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड र नर्दन आयरल्याण्ड समेतमा ३० डिग्री सेल्सियस भन्दा उच्च तापक्रम रेकर्ड गरिएको छ । जुन सन् २०१३ यताको सबैभन्दा बढि हो ।
एनआरएन यूकेले प्रवक्ता रमेश सराङकोटीलाई संयोजक तथा सचिव तारानाथ भण्डारीलाई सहसंयोजक बनाएर च्यारिटी दर्ताको प्रक्रियालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी समेत दिएको छ ।
नेकपाका सांसद डा. पाठक लण्डन आउंदै
लण्डन । बाग्लुङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद डा. सूर्य पाठक लण्डन भ्रमणमा आउने भएका छन् ।
लण्डन, बेलायत । यूरोपेली संघ (इयू)बाट बेलायतको बहिर्गमनका लागि बेलायती संसदमा दर्ता भएको विधेयकले महिनौ लामो बहसपछि अन्ततः मङ्गलबार कानूनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
लण्डनमा उबरको लाइसेन्स नविकरण नगर्ने टिएफएलको निर्णय अदालतले उल्टायो
लण्डन । लण्डनमा सञ्चालनका लागि उबरको लाइसेन्स नविकरण नगर्ने ट्रान्सपोर्ट फर लण्डन (टिएफएल) को निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदिएको छ ।